राष्ट्रको संघीन मोडमा समेत वफादारका साथ पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गरेको छु :- थापा - Janapukar
प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क राष्ट्रको संघीन मोडमा समेत वफादारका साथ पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गरेको छु :- थापा
प्रस्तुति :- किशोर श्रेष्ठ
उर्लाबारी, १६ चैत - स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा मोरङमा उम्मेद्वारहरुका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिका, नगर पालिका र गाउँपालिकामा विभिन्न पार्टीका नेता उम्मेद्वार बन्न छलफल सुरु गरेका छन् । पछिल्लो समय उर्लाबारी नगरपालिकाको मेयर को बन्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ । उर्लाबारीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, लगायतका पार्टीमा मेयरका लागि आन्तरिक दौडधुप चलिरहेको छ । पार्टीहरु संस्थागत रुपमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउँदा विजय हासिल गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् भने उम्मेद्वारका आकांक्षीहरु आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउन लागि परेका छन् ।
विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र, राप्रपा, लगायतका पार्टीमा दौडधुप देखिन्छ । देशकै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उर्लाबारीका मेयरको उम्मेद्वार बन्न आन्तरिक दौडधुप तीब्र बनेको छ । कांग्रेसमा वर्तमान सभापति बीरबल थापाको नाम पनि चर्चामा छ । लामो समयदेखि कांग्रेसमा आवद्ध थापा स्थानीय राजनीतिका चतुर खेलाडीका रुपमा समेत परिचित छन् ।
आगामी स्थानीय निर्वाचन र उनको उम्मेद्वारीका विषयमा थापासँग गरिएका कुराकानीका केही अंशहरु :-
तपाईंको राजनैतिक यात्रा कसरी सुरु भयो ?
- २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात जव निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो वास्तवमा देशमा त्यस पश्चात स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक गतिविधिहरु सुरु हुन थाले । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस उर्लाबारीका संस्थापक सभापति डा. नरेश थापा हुनुहुन्थ्यो । नाताले नजिक भएका कारण पनि उहाँले प्रतिवन्धित कालमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको योगदान र भूमिका अनि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता स्व. वीपी कोईरालाले प्रतिपादन गरेको नीति सिद्धान्तबाट प्रभावित भई मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो ।
पार्टीकोे कुन–कुन तहमा बसेर काम गरिसक्नुभएको छ ?
- पार्टीमा आवद्धता पश्चात सर्वप्रथम त मैले तत्कालीन अवस्थामा पार्टीको संगठनको संरचना अनुसार काम गर्दै आएँ । प्रत्येक तीन वडाको एउटै वुथ कमिटी हुन्थ्यो जसमा मैले वुथ नं. ४ को सचिव भएर जिम्मेवारी सम्हालें । त्यसपछि नेपाल तरुण दलको उर्लाबारी गाउँ सभापति हँुदै मोरङ जिल्ला तरुण दलको उपाध्यक्ष पद सम्हालें । यसैगरी उर्लाबारी कांग्रेसको गाउँ सचिव हुँदै ११ आंै अधिवेशनबाट गाउँ सभापति बन्न सफल भएँ । १२ औं अधिवेशनबाट पुनः गाउँ सभापति पद सम्हालें र भख्खरै सम्पन्न १३ आंै अधिवेशनबाट पुनः नगर सभापतिमा निर्वाचित भई जनताको वीचमा राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको कुरा अवगत गराउँदछु ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
- लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन नभईरहेको अवस्थामा सरकारले यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै जनताको चाहना र इच्छा अनुसार स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई समेत कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको र सबै राजनीतिक पार्टीहरु एकतावद्ध भई स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार भएको पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा निर्वाचन हुनेमा म पूरा विश्वस्त छु ।
तपाईं पनि उम्मेद्वार बन्ने कुरा चर्चामा छ ? पार्टीले टिकट देला ?
= सर्वप्रथम त को उम्मेद्वार हुने भन्ने कुरामा पार्टीले मापदण्ड तयार गर्दैछ । जसमा पार्टीमा लामो समयदेखि विभिन्न तह र पदमा रही जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सामाजिक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरु वीच म आफूले पनि ति कार्यहरुलाई राष्ट्रको संघीन मोडमा समेत वफादारका साथ पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गरेको छु । साथै, जनताका जनजीवीका तथा विकास निर्माणका सवालमा जनतासँगै परिचालित हँुदै पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई पनि पूर्ण रुपमा निर्वाह गरेको छु । पार्टीलाई संगठित रुपमा अगाडि बढाउन साथै संगठन विस्तार गर्दै उर्लाबारीमा नेपाली कांग्रेसको छुट्टै पहिचान बनाउन समेत मेरो भूमिका अहम् रहेको मैले महसुस गरेको छु । यी सम्पूर्ण पक्षलाई विचार गर्दा मेरो उम्मेद्वारीको चर्चा हुनु अस्वभाविक होईन । पार्टीले म जस्तो जिम्मेवार र वफादार सिपाहीलाई मुल्याङ्कन गरी जनताको सेवा गर्ने मौका दिन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
तपाईं उम्मेद्वार बन्नुभयो भने जित्ने आधारहरु के – कस्ता छन् ?
- पहिलो कुरा त विगतमा भएको क्षेत्र नं. ९ को संविधान सभाको निर्वाचनमा उर्लाबारीवासीले नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन जुन भूमिका खेलेका छन् त्यसैले नै प्रष्ट हुन्छ की आम उर्लाबारीवासी नेपाली कांग्रेसप्रति विश्वस्त छन् । त्यसमा पनि म लामो समयदेखि पार्टीको उर्लाबारी सभापति पदमा रही जनताका दुःख–सुख, गरिवी, अशिक्षा लगायतका जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा प्रत्यक्ष रुपमै संलग्न रहँदै जुन भूमिका निर्वाह गरेको छु । यसले नै मलाई विजयी गराउन सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
उर्लाबारीको राजनितिक शक्तिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
- विगत लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्था र संसदीय निर्वाचनलाई नियाल्दा नेपाली कांग्रेस नै अगाडि रहेको प्रष्ट छ । तथापी यस स्थानीय निर्वाचनमा एउटा नयाँ पुस्ता पनि सहभागी भईरहेकोले उक्त मत नै निर्णायक हुनेछ । जसले गर्दा सो पुस्ताको भावनालाई समेट्न सकेको अवास्थामा कुन राजनीतिक दल बलियो हुनेछ भन्ने कुराको निक्र्योल हुनेछ ।
उर्लाबारीमा राजघाट र मधुमल्लाको केही वडा मिसिँदाको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जित्न कत्तिको सहज छ ?
- राजघाट र मधुमल्ला उर्लाबारी नगरपालिकामा जोडिंदा ती ठाउँहरुको संगठन पनि पहिलेको तुलनामा अझ मजबुद, दरिलो भइरहेको छ । राजघाट र मधुमल्ला विगतका समयमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको र हाम्रो संगठन त्यति खेर पनि मजवुद र चलायमान नै रहेका कारणले निर्वाचन परिणामका लागि अझ अनुकुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
उर्लाबारीका मुख्य समस्याहरु के के देख्नुभएको छ ?
- उर्लाबारी नगरका समस्याहरुमा खोलानालामा तटबन्धन, ढलनिकास, बाटोघाटो, विजुली बत्ती, बस पार्क, साप्ताहिक हाट, सुकुम्बासी समस्या, सरसफाई , कुलो पैनी लगायतलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य समस्याका रुपमा मैले महसुस गरेको छु ।
तपाईं मेयर पदमा उठ्दा के के कुरामा सहज होला ?
- उर्लाबारीलाई सुन्दर नगरपालिका बनाउन मैले खेलेका महत्वपूर्ण भूमिका र विगत देखि जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै जनताको वीचमा रहेर काम गर्दै आएकाले स्थानीय बासिन्दाहरुको मन जित्न आफू सफल रहेको मेरो बुझाई छ । त्यसैले जनतासँग सहकार्य गरेर काम गरेकै आधारमा पनि मलाई निर्वाचनमा अझ सहज होला भन्ने महसुस गरेको छु ।
उर्लाबारीमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
- उर्लाबारीमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था एकदमै राम्रो रहेको मैले महसुस गरेको छु । पार्टी तथा संगठनहरु सक्रिय छन् । यसकै आधारमा २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचन पनि काग्रेसले जित्न सफल भएको हो । अहिले पनि पार्टी संगठन मजवुद नै रहेकोले उर्लाबारीमा कांग्रेसको अवस्था राम्रो रहेको छ ।
टिकट पाएर तपाई मेयर बन्नुभयो भने मुख्यतया उर्लाबारीमा के कस्ता काम गनुहुन्छ ?
- मलाई पार्टीले मेयरको टिकट दिएर जनताले विजयी गराएको खण्डमा उर्लाबारीमा रहका प्रमुख समास्याहरुको समाधान गर्न लाग्नेछु । त्यसका अलवा मेरा आफ्ना पहुँचले भ्याएसम्म विभिन्न सरकारी निकाय एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी सुन्दर तथा समुद्ध उर्लाबारी शहर बनाउने कुरामा कुनै कसुर बाँकी राख्ने छुईन ।
- आम उर्लाबारीवासीका समस्याहरुलाई चिर्न सक्ने, योजना ल्याउन सक्ने, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्ने कुशल व्यक्तित्वको पहिचान गरी विवेक पूर्ण ढंगबाट मेयर पदको उम्मेद्वार छनोट गरी उर्लाबारी नगरलाई सुन्दर र समुद्ध बनाउन २०७४ साल वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी बन्न सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछु । साथै, म मेयर पदको आंकाक्षी उम्मेद्वार रहेको कुरा पनि यसै पत्रिका मार्फत अवगत गराउन चाहन्छु ।